दीर्घसेवी स्रष्टा भन्छन्, धैर्य गरौं, घरमै बसौं
नेपालमा झन्डै चार सातादेखि बन्दाबन्दी छ। यो कति लम्बिन्छ अनिश्चित छ। धेरैलाई दिन बिताउन गाह्रो छ यतिबेला।
कतिपय सिर्जनात्मक काममा व्यस्त छन्। कतिपय घरकै काममा सक्रिय छन्। कोही चिन्तामा छन्। दीर्घसेवी स्रष्टाचाहिँ के गर्दै छन् त? उनीहरु घरमै छन्। र, अरुलाई पनि घरमै बस्न सल्लाह दिन्छन्। भन्छन्, याे धेर्य गर्ने बेला हाे।
रचना साहित्यिक मासिकका सम्पादक रोचक घिमिरे व्यायाम र आराम गरेर दिन बिताइरहेका छन्। ‘नयाँ केही लेख्ने जाँगर चल्दो रहेनछ,’ घिमिरेले भने, ‘कहाँ के भइरहेको छ भन्ने विषयले ध्यान तान्दो रहेछ। पढ्न पत्रिका उपलब्ध छैनन्। टीभी हेर्‍यो, बस्यो।’
२०१८ सालदेखि घिमिरेको सम्पादनमा प्रकाशन हुन थालेको रचनाको १ सय ६४ अंक निस्किसकेको छ। नयाँ अंकको कामचाहिँ लकडाउनकै कारण रोकिएको छ।
‘बिहान एकछिन छतमै हिँड्छु। योगका केही आसन गर्छु। डाक्टरले ढाड दुखाइ कम गर्न केही फिजियो सिकाएका छन्, त्यही गरेर दिन काटिराछु,’ ७९ वर्षीय घिमिरेले भने।
‘उहिल्यै बाआमाले फलानो गाउँमा हैजा सल्केको छ रे, त्यता नजाओ है भन्नुहुन्थ्यो,’ उनले सुनाए, ‘यस्तो महामारी थाहा थिएन। कति दिन थुनिनुपर्ने हो? दिएको निर्देशन पालना गर्नु परिहाल्यो।’
अभिव्यक्ति साहित्यिक मासिकका सम्पादक नगेन्द्रराज शर्मा फुर्सदमा छन्। दुई सयभन्दा बढी अंक निस्किसकेको पत्रिकाको नियमित प्रकाशन रोकिएको छ।
अभिव्यक्ति २०२७ सालदेखि निरन्तर प्रकाशित छ। ८३ वर्षीय शर्माले भने, ‘अहिले महामारीले गर्दा प्रेसमा पठाएको पत्रिका निस्कन सकेन।’ उनले धैर्य गरेर घरै बस्नुको विकल्प नरहेको बताए।
लेखक राप्रउ पोखरेल पनि लेखपढ र घरायसी काममै दिन बितिरहेको बिताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बन्दाबन्दीका बेला घरबाट बाहिर जानु भएन। भए पनि स्वास्थ्यका कारण धेरै हिँडडुल गर्न सकिन्न। बन्दाबन्दी नभएको भए नयाँ पुस्तक आइसक्थ्यो।’
पाेखरेलको यसअघि ‘धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक विस्तारवाद’ पुस्तक प्रकाशित छ। उनका मधेस पष्ठभूमिका कथा चर्चित छन्। ‘नयाँ पुस्तकको लगभग काम सकिएको छ। शीर्षक के राख्ने भनेर घोत्लिरहेको छु,’ उनले भने। पुस्तकमा साहित्य, संस्कृति र इतिहासका खोजमूलक लेख संगृहीत छन्।
गीतकार एवम् वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक यादव खरेलले कहाँ के भइरहेको छ भन्ने जानकारी लिएर घरै बसिरहेको बताए। ‘वृद्धवृद्धालाई कोरोनाको बढी जोखिम हुन्छ। अहिले कहीँकतै नगई र आपत् परेकालाई बाहेक आउन पनि बन्देज लगाएर सरकारी निर्देशन पालना गरिरहेका छौं,’ खरेलले भने, ‘अलिअलि पढलेख गर्ने र पुस्तकालय मिलाउने काम गरिरहेको छु।’
उनले आमनागरिकलाई बन्दाबन्दीको पालना गर्न अनुरोध गरे। ‘शरीर आफ्नो भए पनि रोग आफ्नो हुँदैन,’ खरेलले भने, ‘आफू र आफ्नाको सुरक्षार्थ पनि हामीले सरकारी निर्देशन पालना गर्नुपर्छ।’